Shandong ZhongPeng Special Ceramics Co., Ltd. (ZPC) yinkampani professional ukwenza imveliso, R & D kunye neentengiso eliphezulu-komsebenzi iimveliso lesilicon khabhayithi, RBSiC / SiSiC (Reaction kwii Silicon khabhayithi).
Shandong ZhongPeng Special Ceramics CO., LTD umiselwe phezu komhlaba uthenge. efektri yethu kuthatha indawo ye 60000 yezikwere ibekwe Weifang, Shandong, China. intsebenziswano emangalisayo kunye unjingalwazi eyunivesithi yendawo owenza isifundo edityanisiweyo ubushushu-enganyangekiyo esinalo. ZhongPeng Company nayo indawo yophando ukwenzela eyunivesithi yendawo. brand Main kukuba 'ZPC'. Thina uphando kunye nophuhliso iqela lethu lobungcali yokukhonza umthengi.
Ngamava lwemveliso kwiminyaka engaphezu kwama-10, iqela lethu zobugcisa inokubonelela 3D neziphumo imizobo noyilo umlomo wabo kunye experiments zovavanyo yokutshiza. iimveliso zethu ubume theory entle leyo kuqinisekisa ukusebenza kukhuphiswano. iimveliso zethu ayalingana kwiimveliso ezifanayo evela eJamani nase-United States.